Hooyo maamusha inay badbaadiso nolosha gabadheeda mahadnaqa hawsha Raadinta Saaxiibbaday | Wararka IPhone
Apple waxay kadhigeysaa arjiga Find my asxaabta inaan helno anaga oo ah codsi aan marwalba ku ogaan karno halka ay joogaan asxaabteena ama qoyskeena, ilaa iyo inta labada qofba ay bixiyeen ogolaansho ay kuwadaagaan goobta ay kuyaalaan. Tan waxaa loo arki karaa inay tahay seef laba af leh, laakiin munaasabadaha maanta oo kale, waxay badbaadin kartaa nafta.
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sheekada Macy Smith, oo ah gabar 17 jir ah oo ka soo jeeda Waqooyiga Carolina, oo ku mahadsan in aan hawlgeliyey raadinta saaxiibaday ee la shaqeeya qoyskeeda, waa lay heli karaa ka dib markii ay dhowr jeer rogtay gaadhigeeda oo ay ku xannibantay salka qarka.
Catrina Alexander, Macy hooyadeed waxay ka walwalsaneyd in Macy uusan qaban taleefanka isla markaana uu guriga imaan doono wixii ka dambeeya sidii caadiga ahayd. Markuu arkay inaysan jirin wado lagula hadlo gabadhiisa, wuxuu adeegsaday arjiga Raadinta asxaabteyda kaas oo ah si dhakhso leh ayuu u ogaaday halka ay inantiisu joogto, iyada oo halkaas ku wadaysa qoyskeeda halkaasoo ay ka heleen iyada oo ku xaniban gaariga.
Macy dhowr jeer ayuu ka rogay wadada wuxuuna ku dhammaaday kursiga dambe ee gaarigaaga oo gacantaadu ku xanniban tahay inta u dhexeysa gaariga iyo dhulka. Taleefanka Iphone-ka laguma gaadho, markaa way ka jawaabi kari wayday wicitaanada hooyadeed, laakiin way deggan tahay tan iyo markii ay hawlgelisay barnaamijka Find my friends, oo ehelkeedu si dhakhso leh ugu heli karaan.
Macy, wuxuu ku boorinayaa dhalinyarada kale inay daaraan Find My Friends iyaga iyo xubnaha qoyskooda, in lala wadaago goobta eheladooda marwalba, iyadoo la sheegayo in si dhuumaaleysi ah ama aadan ugu sheegin waalidkaaga halka aad joogto aysan u qalmin, gaar ahaan haddii aad nasiib darro kula kulanto shil.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Hooyo maamusha inay badbaadiso nolosha gabadheeda mahadnaqa hawsha Raadinta Saaxiibbaday
10x34 Podcast: Xiritaanka Xilliga Falanqaynta Apple News
Baadi-goob caafimaad leh ayaa ah shayga cusub ee Fortnite si uu u soo kabsado una siiyo nolol ama gaashaan saaxiibbada